ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 na 5 Lite: ọnụahịa mmalite nkọwapụta | Androidsis
ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 na 5 Lite: E kpughere ekwentị ASUS na MWC 2018
Edere Ferreno | | Mobiles, MWC, Noticias
Ụbọchị nke abụọ nke MWC 2018 adịtụla jụụ karịa nke mbụ n'ihe gbasara akụkọ. ASUS ebiliwo dị ka nnukwu onye protagonist nke ụbọchị ahụ. Ebe ọ bụ na ha ewepụtala ekwentị ọhụrụ ha atọ. Ọ gbasara ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 na 5 Lite. Modelsdị atọ ọhụrụ nwere gam akporo 8.0 Oreo dị ka sistemụ arụmọrụ wee tinye ncha na enyo nwere obere okpokolo agba.
Site na ekwentị ndị a, ika ahụ na -abịarute iji merie etiti na elu. Ndị a bụ ekwentị nwere ọmarịcha nkọwa na nkọwapụta na -ekwe nkwa na ọ ga -amasị ya nke ukwuu. ASUS nwere nzọ na nkọwa dị mma, ezigbo atụmatụ yana ọgụgụ isi dị ka onye na -akwado ya.
Site na ihe anyị nwere ike ịhụ na ika ejirila ngwaọrụ ọhụrụ ndị a mee nzọ dị mma. Yabụ na ụdị ọhụrụ a ASUS na -achọ inweta ọkwá dị elu n'ahịa. Anyị amatalarị nkọwapụta ekwentị niile. Anyị na -agwa gị karịa gbasara ndị a ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 na 5 Lite n'otu n'otu.
1 ASUS ZENFOONE 5Z
ASUS ZENFOONE 5Z
Anyị na -eji ekwentị kacha dị ike n'ime atọ amalite. Ebe ọ bụ na ngwaọrụ a na -eji ihe nrụpụta dị oke mkpa dị ka Snapdragon 845. Yabụ na ASUS ahọrọla nke kacha mma na nke a. Maka na anyị na -eche onye nrụpụta kacha mma nke 2018 a na mbara igwe gam akporo. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ngwaọrụ:
ASUS Zenfone 5Z nkọwa teknụzụ
Nlereanya Zenfone 5Z
Ihuenyo 6.2 inch FullHD + 19: 9 IPS ruru 90%
Nhazi Snapdragon 845 10 nm
Nchekwa n'ime 64/128/256 GB + microSD
Igwefoto na-aga n'ihu 12MP f / 1.8 nke abụọ 120º 4K / 60fps vidiyo
Igwe n'ihu 8MP f / 2.0
Njikọ 4G LTE WiFi 802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth 5.0 USB ụdị C
Atụmatụ ndị ọzọ Ihu onye na-agụ mkpịsị mkpịsị aka na-emeghe redioFM HDR Hi Res Audio
Ahịa Site na euro 479
N'ebe nke abụọ anyị na -ahụ ekwentị a yiri nke mbụ. Ha nha ma kesaa nkọwa ụfọdụ. Ọ bụ ezie na na nke a processor dị iche. Ọ bụ otu n'ime ndịiche dị n'etiti ụdị abụọ a. Mgbe ahụ, anyị ga -ahapụrụ gị ya Nkọwa nke ASUS Zenfone 5 a:
Nkọwa teknụzụ ASUS Zenfone 5
Nlereanya Zenfone 5
Ihuenyo 6.2 inch nwere FullHD IPS 19: 9 mkpebi
Nhazi Snapdragon 636 14nm
Nchekwa n'ime 64 GB + microSD
Igwe n'ihu 8 MP f / 2.0
N'ebe ikpeazụ anyị na -ahụ nke kacha nta n'ime ụdị atọ nke ika ahụ gosipụtara na MWC 2018 a. Ọ bụ obere ekwentị pere mpe yana nkọwapụta yiri nke nke abụọ. Yabụ na anyị na-eche ihu n'etiti etiti kacha anabata. Bụ bụ nkọwa Nke ngwaọrụ:
Nkọwa teknụzụ ASUS Zenfone 5 Lite
Nlereanya Zenfone 5 Lite
Ihuenyo 6.0 inch nwere FullHD + mkpebi 18: 9 IPS ruru 80 3%
Nhazi Snapdragon 630 14nm
Nchekwa n'ime 32 / 64 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 16MP f / 2.2 120º
Igwe n'ihu 20MP f / 2.0 120º 4K vidiyo
Atụmatụ ndị ọzọ Redio FM onye na-agụ mkpịsị aka mkpịsị aka
Batrị 3.300 mAh
N'ihe banyere Zenfone 5, ewepụtara mwepụta ya n'ọnwa Eprel, n'agbanyeghị na amabeghị ụbọchị ahụ kpọmkwem. Ekwentị ga -ada n'ahịa na -acha anụnụ anụnụ na ọla ọcha yana n'ụdị abụọ (4 na 6 GB nke RAM). Agbanyeghị na ugbu a amabeghị ọnụahịa ekwentị ahụ ga -enwe.
N'aka nke ọzọ anyị nwere Zenfone 5Z, elu dị elu nke ASUS gosipụtara na MWC 2018 a. Ekwentị ga -ada n'ahịa n'ọnwa June, ọzọ na -enweghị kpọmkwem ụbọchị n'ọnwa ahụ. Ga -enwe ọnụahịa nke euro 479 na nsụgharị ya kachasị. Ekwubeghị ya n'ụdị agba ọ ga -ada n'ahịa.
N'ikpeazụ anyị na -ahụ Zenfone 5 Lite, nke dabara n'ahịa na Machị. Yabụ n'ime izu ole na ole ọ ga -adị. A ga -ewepụta ya n'igwe ojii, ọcha na ọbara ọbara n'ahịa. Ọ ga -abịakwa n'ụdị abụọ dabere na RAM na nchekwa ya. Ọnụ ego ekwentị ga -abụ ihe dịka euro 299.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 na 5 Lite: E kpughere ekwentị ASUS na MWC 2018
DOOGEE V: Ihe ngosi ohuru ohuru nke emere na MWC 2018